30 Munamato Wekuparadza Iwo Mudzimu Wokudzokera | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Munamato wekuparadza Iwo mweya wekuseri
30 Munamato wekuparadza Iwo mweya wekuseri
Jeremiya 7: 24:
24 Asi ivo havana kuteerera, kana kurerekera nzeve yavo, asi vakafamba pamano nokufunga kwemoyo wavo wakaipa, vakadzokera kumashure, kwete kumberi.
Jeremiya 15: 6:
6 Iwe wakandirasa, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, wakadzokera kumashure, saka ndichatambanudzira ruoko rwangu pamusoro pako, ndikakuparadza; Ndaneta nekupfidza.
Kudzokera kumashure mweya. Iwo mweya wekudzokera kumashure mweya wekupandukira uye mweya wekupanduka ndiwo mweya weuroyi, 1Samueri 15:23. Mwari havadi kuti vana vake vapanduke, kumukira kunotungamira pakudzokera kumashure. Kana isu tikatanga kuenda zvinopesana nehurongwa uye zvinangwa zvaMwari zvehupenyu hwedu, tinotanga kudzokera kumashure kwete kumberi. Nhasi tiri kuenda kunamatira munamato wandatumidza: Munamato wekuparadza mweya wekudzokera kumashure. Munamato uyu unokupa simba kuti uuraye zvisiri izvo zvishuvo zvenyama zvinokutungamira kupandukira Mwari uye zvakare simbisa mweya wako mumunhu wemukati kuti ushumire Mwari.
Mwari wedu ndibaba vane tsitsi, Anoda vana vake zvakanyanya uye zvisingaite, Akatuma Mwanakomana Wake Jesu kuti atifire uye kutifambisa kubva kumashure kuenda kumberi, Mwari kubudikidza naKristu akatinunura kubva murima kuenda kuchiedza, VaKorose 1:13, kubva pakutukwa kuenda kumaropafadzo, VaGaratiya 3:13, nekuda kwekuteerera kwaKristu, Mwari vakazivisa bhazi rakarurama, VaRoma 5:19. Mwari akatiitira zvese izvi nekuda kwerudo, Aisafanirwa kuzviita, asi Akazviita. Akaita izvi kuti tigone kurarama saKristu uye kwete kurarama hupenyu hwekudzokera shure. Anoziva kuti patinodzokera kumashure, tinodzokera kuchivi, uye zvivi zvinotungamira mukudzikiswa, kumira, kukundikana, kuora mwoyo, kurwara, uye nemhando dzese dzematambudziko emadhimoni. Chivi pakupedzisira chinotitungamira kuraswa kusingaperi, asi icho hachizombove chikamu chako muzita raJesu. Munamato wekuparadza mweya wekudzokera shure unozokupa simba rekurwisa dhiabhori uye umire wakasimba muna Kristu. Munamato wangu kwauri ndewe, Ucharamba uchienda kumberi uye usazombodzokera kumashure muhupenyu zvakare muzita raJesu. Mwari vakukomborere.
1. Nyoka yekudzokera ngaipedzwe nemoto waMwari waEria, muzita raJesu.
2. Chero magirazi emagirazi, anochengetedza kumeso kwangu, epwanya, muzita raJesu.
3. Masimba emadhimoni anorwa nekupokana kwangu munaMwari, sunungura mugumo wangu, muzita raJesu.
4. Ndinoviga muvhimi wese wepanyeredzi yangu nhasi, muzita raJesu.
5. Goriyati rese rehurombo, riparadzwe muzita raJesu.
6. Nhai Mwari simuka mudonhedze mabwe pamberi pevavengi vangu, muzita raJesu.
7.Rwizi rwese rwematambudziko, rwuchiyerera mumhuri yangu rwoma muzita raJesu.
8. Muvengi wese akarongeka ngaave asina kurongeka, muzita raJesu.
9. O Mwari wezviratidzo nezvishamiso zivisa Simba rako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
10.Farao wedzidziso yangu, kufa, muzita raJesu.
11. Chero chinenge chakabviswa mumuviri wangu, gamuchira kununurwa, muzita raJesu.
12. Moto waMwari, kupaza kusapfeka nerima muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
13. Muviri wangu, ramba kubatana pamwe ne chero museve rerima, muzita raJesu.
14. Wese mutsvairo mutsvairo, kutsvaira makomborero angu, kufa, muzita raJesu.
15. Yese joko kugadzira, kufa nejoko rako, muzita raJesu.
16. Zvese satanic investment muhupenyu hwangu, ngazvitambiswe, muzita raJesu.
17. O Ishe, rega hupenyu hwangu huone kusimudzira kweVamwari, muzita raJesu.
18.Satani ajenda ehupenyu hwangu, nyangarika nemuzita raJesu.
19. Yese nhumbu ya satan muhupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.
20. Unomedza kugona kwangu, kufa, muzita raJesu.
21. Chero kusaziva kusonganirana kwakaipa kusangano, ndisunungure uyeparadzira muzita raJesu.
22. museve wese wekumanikidza, bhururuka uende, muzita raJesu.
23. Ini ndinodaidza Razaro wangu kubva paguva revaroyi muzita raJesu.
24. Chero simba rinomedza mwari mikana, kufa, muzita raJesu.
25.Muvengi wese, wakaramba kuti ndiende, tambira kuparadzwa kwakapetwa, muzita raJesu.
26. Kenduru dzose dzakaipa uye zvinonhuwira, zvichindirwisa, iko kudzima moto, muzita raJesu.
27. Miseve yega yetsika uye zvibayiro, backfire, muzita raJesu.
28. Kana muvengi wangu ari kuti ndinogona kubudirira pamusoro pechitunha chake, saka ngachive saizvozvo, nekuti zvino yave nguva yekuti ndibudirire
29. Ini ndinopinda mune yangu chiporofita chekutongwa, muzita raJesu.
30. Ini ndinotaura kune dumbu remvura, sunungura zvigadzirwa zvangu, muzita raJesu.
Baba ndinokutendai neminamato yakapindurwa muzita raJesu.
Previous nyayaMaitiro Ekumisa Kubhuroka Kunamatira Mato
inoteveraMasimba Emunamato Akasimba Kune Kufarirwa Namwari
Freja Nyundo Ndira 20, 2020 At 7:33 pm
KUDZIDZA: Sunga mazuva matatu uchitsanya uye minamato pakati pe m m. Namata uchishandisa Isiah 3: 43-1, Jeremiah 28:29 Mweya wekudzokera kumashure kubva kuimba yababa vangu uye imba yamai, uchikanganisa mhedzisiro yangu, kuputswa nemoto, kuputswa nemoto, kuputswa nemoto, muzita raJesu.
Nkasiima Kubvumbi 18, 2020 At 5:05 pm
Hapasisina madhimoni satan muhupenyu hwangu muzita raJesu
Aluko Chikunguru 31, 2020 At 5:03 am
Inoda munamato kubva kumweya wekudzokera kumashure. zvichingoenda zvakadaro
Pls ndibatsireiwo Mufundisi ndaneta nazvo
Karryann Davis Gumiguru 23, 2020 Na6: 01 pm
Usarega, hanzvadzi. Ramba uchinamata nekutsanya. Ramba uchienda. Mwari vane musana wako. Sunda wakananga mucherechedzo muzita raJesu.
Tessalie Tisson Ndira 12, 2021 At 3:15 pm
@Aluko, enda kutsanya. Namata nemagwaro uchipesana nearitari dzose dzakaipa dzakavakwa nemadzitateguru ako. Kutanga nekuzvininipisa iwe, nekukumbira ruregerero kwavari, uye iwe pachako, chero kwawakatyora mitemo, mirairo, zvirevo nemirau yaMwari. Unogona kuenda kuYouTube uye kutsvaga kwaKevin Ewing, ane dzidziso dzakasimba dzekuti ungaita sei nezvekutsanya nekunamata, uye nzwisiso yezvekutukwa kwerudzi, zvinoreva zviroto etc. Tariro iwe ukaona iyi komendi uye netariro inobatsira. Makaropafadzwa.
Hannah Ndira 14, 2021 At 9:42 pm
Ndatenda!! Mwari vakuropafadze Pastor
ebisa Kurume 15, 2021 At 5:06 pm
plz munhu waMwari ndinamatirei pazita remunamato uye Mativi ese ehupenyu mafambiro !!!
Obadiah yarima dagwa Kubvumbi 5, 2021 At 7:45 am
Ndinoda munamato ndichipesana nekudzokera kumashure pakunamata muhupenyu hwangu, chero nguva pandino rota ndichazviona ndiri mumusha, ndichizviona ndiri kuchikoro kana kunzvimbo yangu yandaimboshanda.uye vanhu vandinavo ndinovasiya ndichaona ndoenda kumba kwavo zvekare. kutsanya kupokana nazvo asi ndisingakwanise kufadza I need ur prayer.
Elly Chikunguru 22, 2021 At 3:58 am
Ndinorota nezvevabereki vangu vakandirera, tete vangu nasekuru uye vanhu vese vakafa mumusha mangu, ndinorota vanhu vemumusha mangu vachindipa chikafu, handirari usiku ndinorota shamwari dzangu dzichindipa chikafu mune rara, ini ndaneta chaizvo. Ndokumbirawo parstor ndibatsirewo
Munamato weDziviriro Pakaipa
30 Nzvimbo Dzeminamato Dzinengozi Kumirisana Nevanodzvinyirira